Madaxweyne Uhuru oo cadaadis lagu saarayo in uusan ansixinin hindisihi ay baas mariyeen xildhibaanada Jubilee – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweyne Uhuru oo cadaadis lagu saarayo in uusan ansixinin hindisihi ay baas mariyeen xildhibaanada Jubilee
Waxaa si aad ah isku soo tarayaa cadaadiska xoogan ee la saarayo Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta kaaso ku aadan in uusan qalinka ku duugin sharicigii buuqa iyo qalalaasaha ay kumeel mariyeen xildhibaanada aqalka Barlamaanka ee dalka.
Arintan ayaa kadambeysay kadib markii arbacadi aynu soo dhafnay xildhibanada kasooo jeedo xisbiga talada haya ee Jubilee ay ansixiyeen sharci u ogolaanayo gudiga doorashada ee dalka in ay gacanta kutiriyaan cododka laga dhiiban doono doorashada hadi ay shaqeyn waayan qalabka tochnoolijiyada.
Waxaa xeerkan si aad ah oga soo horjestay xildhibaanada isbahaysiga mucaradka ugu weyn dalka ee CORD kuwaaso ku andacoonaya in tilabadaasi ay tahay mid Jubilee ay ku doonayaan in ay ugu shubtaan doorashada.
Khilaafkaas u dhaxeeya xisbiga talada iyo isbahaysiga Mucaaradka oo sare u kacay ayaa hadda horseday in ururkada kala duwan ee dalka ay ugu baaqan Madaxweynaha dalka in sharcigaasi uusan saxiixan si sharci uusan u noqon.
Ururka ay kumideysan yihiin muslimiinta dalka ee mahgacooda loo soo gaabiyo SUPKEM iyo ururka kaniisadaha dalka ayaa oga digay Madaxweynaha in uusan kicinin rabshado siyaasadeed.
Xoghayaha ururka Supkem Hassan ole Naado ayaa ku baaqayaa in Madaxweynaha uu si aad oga firsado qalin ku duugida sharicgaasii kaaso marka dambe dhalin karo qalalaasa siyaasada oo uu dalka lugaha la galo.
Mucaaradka ayaa dhankooda wali ku adkeysanayaa in ay dhigi doonan mudaaharad balaaran oo looga soo horjeedo sharcigan 4-ta bisha soo socota ee Janaayo.
Waxaana la xasustaa mudaaharadyo looga soo horjeeday saraakisha sare sare ee gudiga doorashada iyo xuduudaha dalka ee IEBC oo bishii june ay dhgeen mucaaradka lagu dilay dhowr qof halka kuwa kalana dhaawacyo soo gaaray.
← Boqolaal caruur ah oo dalka ku nool oo la sheegay in ay u dhintaan cuduro laga hortagi karo
Ururka ay kumideysan yihiin shaqalaaha jaamacadaha oo ku goodiyay shaqo joojin qaran →